Cudurrada Duumada Iyo Shuban Biyoodka Oo Ka Dilaacay Deegaanka Xeraale Ee Galgaduud – Goobjoog News
Maamulka deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in cudrro ay ka dilaaceen deegaankaasi, kuwaasi oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto.
Guddoomiyaha deegaankaasi Daahir Dhago-badan oo la hadlay Goobjoog, ayaa sheegay in hadda dadka badi ay la il daran yihiin cudurrada Duumada iyo Shuban Biyoodka.
Wuxuu sheegay ineysan jirin dawo rasmi ah oo ay dadkan u hayaan, sidoo kalena wuxuu sheegay in laga gaabiyey baaqyo ay u direen dowladda Federaalka iyo Galmudug.
“Dadku wuu daadsan yahay, Xeraale caafimaadkeeda waa in wax laga qabtaa, waxaan idiin sheegayaa iney dadka guryahooda daadsan yihiin, in Duumo iyo Shuban Biyood ay dadka si ba’an ula jiifaan, mana jirto dhaqtar daweeya” ayuu yiri guddoomiyaha.
Ugu dambeyn, guddoomiye Dhago-badan ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug in sida ugu dhaqsiyaha badan ay gurmad caafimaad ula soo gaaraan shacabka ku dhaqan deegaankaasi.
Muqdisho iyo guud ahaan dalka oo laga xusay maalinta koowaad ee Ciidul fidriga
Howlgal Dad Badan Lagu Qabtay Oo Ciidanka DFS Ka Sameeyeen Muqdisho
Faah Faahin: Qof Shacab Ah Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho
Abukaate Xalane: Sharciga Halagu Dhammeeyo Khilaafka Golaha Shacabka
Vmegtn dvbpza Viagra mail order buy real cialis online
Ibgkul atsgfc Viagra brand buy cialis...
Lnqfft fpmqhf Viagra mail order cialis coupon...
Nybrhz zwxvnp Generic viagra cialis walmart...
Spgvuv pmndbp Viagra best buy cialis black...
Qepvzp pizoex lowest price on generic viagra cialis without...